ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘေဘီလေး ကျန်းမာနေစေဖို့ - Hello Sayarwon
အခုလို ကိုဗစ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ မေမေတိုင်း စိတ်ပူနေမယ့် ကိစ္စလေးက ကိုယ့်ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ ဖျားနာမှာကို ဟုတ်….
မေမေတို့က ကိုယ်ကိုတိုင်အတွက်ထက် သားသားမီးမီးတို့အတွက် ဦးစားပေး စဉ်းစားတတ်သူတွေပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း မိခင်ဆိုတာ သားသမီးတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရာလို့ ဆိုကြတာပေါ့။
အခုကာလမှာ မေမေတိုင်း စိတ်ပူနေမယ့် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုက ကင်းဝေးပြီး သားသားမီးမီးတို့ ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝ ကျန်းမာနေအောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ပေးရမလဲ ဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က လူကြီးတွေမှာတင် မဟုတ်ဘဲ ကလေးတွေမှာပါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်နေပြီး ကလေးတွေမှာ သိပ်မပြင်းထန်တာမျိုးပဲ ကွာပါတယ်။
ဒီလိုကာလမှာ ချစ်မဝတဲ့ ဘေဘီလေးတွေကို ကျန်းမာနေစေဖို့ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းက ဘေဘီလေး ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝနေစေဖို့အတွက် အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် ပြင်ဆင်ပေးတာပါ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ ချစ်ရတဲ့ ဘေဘီလေး ကျန်းမာစေဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ပေးမယ် စိတ်ကူးလဲ မေမေတို့ရေ………..
ဒီကာလမှာ ဘေဘီလေးတွေကို ရောဂါကပ်ဆိုးဘေးက ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းက အာဟာရပြည့်ဝမျှတအောင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပါ။
ဒါကြောင့် ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘေဘီလေး ကျန်းမာနေစေဖို့ ဆိုရင် အခုလိုလေး ပြင်ဆင်ပေးလို့ ရပါတယ်။
ဘေဘီလေးက မွေးစကနေ ၆ လ အရွယ်ဆိုရင်တော့ မိခင်နို့ကို တတ်နိုင်သမျှ များများတိုက်ပါ။ မေမေက အာဟာရ ပြည့်ဝမျှတအောင် စားသုံးဖို့တော့ လိုပါမယ်။ အာဟာရပြည့်ဝမျှတမှုက ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို မတော်တဆ ကူးစက်ခံရရင်တောင် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ အာဟာရ ပြည့်ဝမျှတမှုက ဘေဘီလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။
ဘေဘီလေးက ၆ လ အထက်ဖြစ်ပြီး solid food တွေ စစားပြီဆိုရင်တော့ မေမေ့နို့အပြင် အခုလိုလေးတွေ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဘေဘီလေးရဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ
ထမင်း၊ အုတ်ဂျုံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးတွေ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အခွံမာသီးတွေ၊ ဆန်လုံးညို၊ ပဲနီလေးစတာတွေကို ပြင်ဆင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့်၊ ပြောင်းဖူးစတာတွေကို ဘေဘီလေး စားလို့လွယ်အောင် ခပ်ပျော့ပျော့လေး ပြင်ဆင်ပေးရပါမယ်။
ဒီလိုပြင်ဆင်ပေးမှုနဲ့အတူ မုန်လာဥနီ၊ ရွှေဖရုံသီး၊ အာလူးစတာတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဒီအစားအစာတွေကို တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်လောက်အထိ ကျွေးပေးပါ။
ဘေဘီလေးမှာ ကိုယ်ခံအားပြည့်ဝအောင် ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစေဖို့ ကြက်ဥ၊ အဆီမပါတဲ့ အနီရောင် အသား၊ ကြက်သား၊ နို့ စတာတွေကိုလည်း တစ်နေ့တာ စားသုံးမှုမှာ ပါဝင်အောင် စားသုံးပေးပါ။
ဘေဘီလေးရဲ့ နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာ လိမ္မော်ရောင်နဲ့ အနီရောင်တောက်တဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပေးပါ။
ကလေးက အသက် ၂ နှစ်ကနေ ၃ နှစ်ကြား ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့တာမှာ သစ်သီး တစ်ခါပြင်စာလောက် ပါဝင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဒါမှလည်း ကိုယ်ခံအားကို အားဖြည့်ပေးမယ့် ဗီတာမင်တွေ ပြည့်ဝစွာ ရရှိမှာပါ။
ဘေဘီလေးကို တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ် ငါး ပါဝင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးပါ။
ဘေဘီလေးက အသက် ၅ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ သစ်ကြားသီး၊ အယ်လ်မွန်စေ့တို့လိုမျိုး ပရိုတင်း ကြွယ်ဝတဲ့ အစေ့အဆန်တွေ ပြင်ဆင်ပေးပါ။
ဗီတာမင် D ရရှိစေဖို့ ဗီတာမင် D ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ နို့၊ ဒိန်ချဉ်စတာတွေကိုလည်း တစ်နေ့တစ်ကြိမ်​ ပြင်ဆင်ပေးပါ။
တစ်နေ့တာမှာ ရေကို ၅ ခွက်ကနေ ၇ ခွက်အထိ သောက်ဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်တိုက်ပါ။
ကလေးကို အချိုရည်တွေ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အငန်များတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ဆီကြော်တွေ မကျွေးပါနဲ့။ နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာ ဆားပါဝင်မှုကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းထက် မပိုစေဖို့ သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးပါ။ တစ်နှစ်အောက် ကလေးကို ဆားလုံးဝမကျွေးရပါ။
အခုလိုကာလမှာ သားသားမီးမီးတို့ကို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးတွေ ဂရုစိုက်ပေးမှုနဲ့အတူ အခုလိုလေး သေချာ ပြင်ဆင်ပေးရင်း ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်လိုက်ရအောင်လား မေမေတို့ရေ………..
What should kids eat to fight COVID-19? https://www.rediff.com/getahead/report/what-should-kids-eat-to-fight-covid-19/20210507.htm Accessed Date5August 2021
Feeding young children during the COVID-19 pandemic https://www.unicef.org/eap/feeding-young-children-during-covid-19-pandemic Accessed Date5August 2021